UJames Franco ngutata obalekayo 'ungabuyi kwinyanga' - Iimuvi
Eyona Iimuvi UJames Franco Ngutata Okholisayo kwi-Grim 'Musa ukubuya evela eNyangeni'
UJames Franco Ngutata Okholisayo kwi-Grim 'Musa ukubuya evela eNyangeni'
UAlyssa Elle Steinacker noJeffrey Wahlberg kwi Sukubuya eNyangeni .Ingqondo yeendaba
Kwindawo eyomileyo, efileyo yaseNtshona apho kungaze kwenzeke nto ngaphandle koqhwithela lothuli, utata womfana ushiya ikhaya, eshiya oonyana ababini abamdinga kunye nomama wabo othukileyo omthandayo ukuzimela. Yinto yakutshanje kuthotho lwezinto eziye zatshabalalisa idolophu yamadoda nooyise-ikamva abantwana abalibizayo ngokuya enyangeni. Inyanga sisikweko sayo yonke into eyenzekayo kwindawo eyinkqantosi, e-acrid kunye neyasemzini kwindawo yoLwandle lwaseSalton kuMazantsi eCalifornia kufutshane neDesert Hot Springs kunye noJoshua Tree ekhangeleka ngokungafaniyo nenyanga yenyanga uqobo.
Yibhayisikobho encinci kakhulu enefuthe elikhulu kakhulu leemvakalelo elivelayo ngamehlo kaMickey oneminyaka eli-16 ubudala, edlalwa ngononophelo ngumntu omtsha othembisayo uJeffrey Wahlberg. UMickey uxhelekile emphefumlweni esazi ukuba utata wakhe akasoze aphinde abuye athi ngomzuzu wokucaphuka nokuphelelwa lithemba atshabalalise yonke impahla yendoda endala. Ezula ezitalatweni ezingenanto, ezaphukileyo, uMickey uyakhumbula ukuba le yayihlala iyidolophu enomzi-mveliso, kodwa umzi-mveliso wavalwa, kwafa zonke iimpawu zenkqubela phambili nezorhwebo, kwaye ngoku yindawo egcwele ukubola, amakhaya erhuqwayo alahliweyo kunye neelori ezinomhlwa.
UNGABUYI ENYANGENI ★ ★ ★
(3/4 iinkwenkwezi )
Yeluswa nguwe: UBruce Thierry Cheung
Ibhalwe ngu: UDean Bakopoulos [umboniso weqonga kunye nencwadi], uBruce Thierry Cheung [umdlalo weqonga]
Inkwenkwezi: UJeffrey Wahlberg, uRashida Jones, noJames Franco
Ixesha lokuqalisa: 82 imiz.
Ukuchitha imali ukuthenga i-whisky kunye ne-cigarettes, ulutsha olumelwane luqokelela isinyithi. Umama kaMickey (uRashida Jones) uzidibanisa ngokwaneleyo ukuba avule indawo yokwenza iinwele kunye nendawo yokucheba iinwele, kwaye afumane intuthuzelo emfutshane ngenkwenkwe endala esebenza kwivenkile yokutya, kodwa uMickey uyambetha kwaye uyishiya idolophu, naye. Ukuqhubela phambili ukuthintela lonke ithemba lokuphuma, intombazana uMickey ilala nayo ukuba ibaleke usizi olunesizungu luyakhulelwa. Kwenye yezona ndawo zibalaseleyo zefilimu, uphethe umntwana wakhe omtsha ngokumangaliswa kokufunyanwa emehlweni akhe kwaye uthi, kwindinyana yokugqibela yefilimu, Ngaba lukhona ulonwabo apha entlango? Ewe ikhona. Okwangoku, ayitshintshi yonke into. Inyanga ilandela naphina apho siya khona.
Ngokusekwe kwinoveli ka-2005 nguDean Bakopoulos kwaye ikhokelwe nguBruce Thierry Cheung, imovie inomdla wokubhala malunga neemvakalelo ezinesithukuthezi kunye nokulangazelela okungenanto, okuboniswa kukuphinda-phinda ibhotolo ezincanca kwizikreyiti ukuze uqhotse ukutya okutya kweesandwich zeshizi, kodwa akukho ibali lokwenyani apha. UJames Franco wenza inkangeleko emfutshane njengotata oshiya idolophu aze anikezele kubomi obukhohlakeleyo, indima yotshintsho eqinisekisa ukuba uphawu lwentengiso yakhe luyangxola.
Ngaphandle kukaRashida Jones njengomama, abanye abalingisi banamalungu angaziwayo, kodwa uJeffrey Wahlberg unyanisekile kwaye uyachukumisa njengoMickey kangangokuba andithandabuzi ukuba uza kuhlala engaziwa ixesha elide. Ndiyithandile imvakalelo yamandla emiboniso bhanyabhanya ngaphandle kwento entle ukujonga, kodwa Sukubuya eNyangeni Ekugqibeleni isilele ukubandakanya ababukeli ngokupheleleyo kuba imalunga neziphumo zobomi obumoshakeleyo endaweni yeziganeko ezibuhlungu ezikhokelela kwenye. Inomdla kwaye isondele, kodwa akukho cigar.
Udliwanondlebe olukhethekileyo: Dibana noMaddox, umnini we-Intanethi 'Elona Phepha liBalaseleyo kwiNdawo iphela'
UKaytranada Usikhumbuze ii-DJs eziGqwesileyo azidingi kuzifihla emva kweeLaptops
'Umdumisi ongaziwayo' uMvelisi: 'Le ayisiyiyo Bachelorette'
Ukuya phi kwiNcwadi yokuGqibela yoMzuzu wokuGqibela ngo-Eva eLas Vegas
Imveliso eNtsha yeGigi ifuna ukuXhobisa abaseTyhini ngelixa iChiza iMicimbi eThintayo
Inkwenkwezi ye-TV u-Olivia Taylor Dudley yiPatato yesiqhekeza enekratshi-Nantsi indlela eya kumnceda ngayo kwikhondo lomsebenzi
Ukuqwalaselwa Kwakho (Re): Yayiyintoni irekhodi lokuqala lePunk Rock?
Dibana nabalingisi abaza kuBroadway ‘uHarry Potter kunye noMntwana oqalekisiweyo’
Ezona nkqubo ziPhambili ze-MBA ezikwi-Intanethi kwi2021
IKasparov ukuya kwi-Upper West Side
Amadoda ama-4, ii-Orgasms ezingama-24
Ileta eya kuMongameli Obama
elona khadi liphezulu lemizobo
Umdlalo weetrone ezijongwa ngabantu
Uluhlu lwee-albhamu ezingama-2016 zesingqi kunye neeblues
alastair borthwick ibhanki yaseMelika
uhlala phi dylan sprouse